Abahlinzeki bezixhobo zokulima kanye neFektri - China Abalimi beMpahla Yokulima
Imininingwane Yomkhiqizo 3Z uchungechunge lwe-disc type ridger lusetshenziswa kakhulu emkhakheni wamazambane, nemifino. Zinezici zebanga eliphezulu lokukhwela, ukulungiswa kwe-engeli elula, ububanzi obusekelayo nobubanzi obuqinile. Ikhwalithi ephezulu yensimbi engu-65 yamapuleti entwasahlobo yensimbi isetshenziswa kwigeja legeja. Ngemuva kokwelashwa kokushisa, ubunzima buyi-38-46 HRC, ukuqina okuhle nokuqina, ukusebenza okuhle kokungena kwenhlabathi, ukuphenduka kwenhlabathi, ukumboza ikhwalithi kungahlangabezana nezidingo zobuchwepheshe zomkhiqizo wezolimo ...
Imininingwane Yomkhiqizo Isakhiwo sinengqondo futhi ukusebenza kuyavumelana nezimo, okufanele umgwaqo omkhulu nokuhamba kwensimu. Isibonelo, i-trailer yamathani ayi-2 ifakwe kakhulu ngogandaganda abangu-12-25 HP, futhi ukubopha kungaba ukubopha ukushayisana, ukubopha ngomshini noma ukubopha umoya. Ukulahla ongakukhetha kwesokunxele nakwesokudla noma okulahla kathathu. Damping ifomu: nokunwebeka umnsalo ipuleti. Ifomu lokudonswa: i-trodod bukhoma yokudonsa. Ukwelashwa ngaphezulu: umshini omkhulu wokuqhumisa ukuqeda ukucindezela kwe-welding, i-derusting, i-deoxidizing, i-antir ...
Imininingwane Yomkhiqizo I-rotler tiller enamazinyo wokusika ajikelezayo njengezingxenye zokusebenza ibizwa nangokuthi umlimi ojikelezayo. Ngokuya kokucushwa kwe-rotary blade axis, ingahlukaniswa ngohlobo lwe-eksisi evundlile nohlobo lwe-eksisi eqondile. I-tiller evundlile ye-rotary tiller enezingqimba zensimbi evundlile isetshenziswa kabanzi. Ukwahlukaniswa kunamandla aqinile okuchoboza inhlabathi. Ukusebenza okukodwa kungenza inhlabathi iphuke kahle, inhlabathi nomanyolo kuhlanganiswe ngokulinganayo, nezinga lomhlabathi, elingahlangabezana nemfuneko ...
Imininingwane Yomkhiqizo i-3S series subsoiler ikakhulukazi ifanele ukufakwa ngaphansi komhlaba emkhakheni wamazambane, ubhontshisi, ukotini futhi ingaphula indawo eqinisa inhlabathi, ikhulule inhlabathi nezinhlanga ezihlanzekile. It has izinzuzo ukujula adjustable, anhlobonhlobo isicelo, ukumiswa elula nokunye. Ukufakwa ngaphansi komhlaba wuhlobo lobuchwepheshe bokulima obugcwaliswa yinhlanganisela yomshini ongaphansi komhlaba nepulatifomu yamandla kagandaganda. Kuyindlela entsha yokulima ngefosholo elingaphansi, igeja elingenazindonga noma igeja le-chisel ...
Imininingwane yomkhiqizo Igeja lediski lenzelwe ukusebenza kuzo zonke izinhlobo zenhlabathi ukwenza imisebenzi eyisisekelo njengokuphulwa kwenhlabathi, ukukhuliswa kwenhlabathi, ukuguqulwa kwenhlabathi nokuxubana kwenhlabathi. Isetshenziswa ukuvula amasimu amasha nokucubungula izindawo ezinamatshe.Ingasetshenziswa kalula ezindaweni ezinamadwala nezimpande. I-Technical Specification Model Unit 1LYQ-320 1LYQ-420 PDP-2 PDP-3 PDP-4 Ububanzi bokusebenza mm 600 800 500 800 1000 Ukujula kokusebenza mm 200 200 250-300 250-300 250-300 Ububanzi be-Disc ...